Orinasa mpanamboatra finday any China | SJJ
Ny trangan-telefaoninay dia vita amin'ny TPU avo lenta na PVC malefaka malefaka sy silika. Azonao atao ihany koa ny manamboatra aliminioma sy vera marihitra misy magnetika, manarona ny lamosina sy ny zoro telefaona. Ireo karazana fitaovana ireo dia tsy vitan'ny hoe miaro ny findainao amin'ny rangotra sy ny hatairana, fa maharitra ihany koa, ahazoana aina ary mahazaka rano.
Tranga manify sy maivana ary mateza miaro ny efijeryo
Saran'ny bobongolo maimaim-poana rehefa misafidy ny habe / endrika misy antsika
Ny logo manokana namboarina tamina telefaona finday dia mety ho fanontana UV nomerika na fanontana lamba
Orinasa voamarina Sedex, matoky izahay fa hanome vokatra avo lenta
Low MOQ voafetra, manolora serivisy OEM.
Teo aloha: Mpihazona telefaona
Manaraka: Mijoro finday sy mpihazona karatra
Raharaha telefaona manokana
Tranga finday mahafatifaty
Raharaha telefaona finday 7
Raharaha telefaona finday 8
Tompon'antoka mijoro amin'ny carte de crédit
Trangan-telefaona TPU misy bakteria